Pyae Phyo (MMiTD): September 2013
အင်တာနက် ဂျာနယ် အတွဲ (14) အမှတ် (38) (30.9.13)
၀ယ်ဖတ်စရာမလိုတော့ဘူးပေါ့။ အခုအပတ်မှာ အင်တာနက် ဂျာနယ် အတွဲ (14) အမှတ် (38)ကို တင်ပေး
လိုက်ပါတယ်ဗျာ။ ဒီနေ့ 30 ရက်နေ့ထွက် Update လေးပါ ။ ဂျာနယ်ကိုဝယ်ဖတ်ရန်အတွက်အဆင် မပြေ
Dawnstar PC Game
Game အလန်းစားကြီး တစ်ခု တင်ပေးလိုက်ပါတယ်။ Dawnstar ပါ။ ခေတ်ဆန်ပြီး ခေတ်လွန်နေတဲ့ ဂိမ်းကို ဆော့ရသလိုမျိုးပေါ့။ ဆော့ရတာ တော်တော်လေး ကောင်းပါတယ်။ ဖိုင်ဆိုဒ်ကတော့
Posted by Min Thu Ra No comments :
Posted by အိုင်တီသားလေး No comments :
Telsa Energy Collector(For i Phone and i Pad)
နောက်ပိုင်း အသစ်ထွက်လာတဲ့ Game လေး တစ်ခုပါ။ ကစားပုံ ကစားနည်းလေးကတော့ Energy လေးတွေကို လိုက်ပြီးတော့ စုရတဲ့သဘောပါပဲ။ လူတွေလိုသဘောပါ။ ကောင်းမွန်တဲ့ Graphic တွေကိုလည်း တွေ့ရပါတယ်။
Mobile Guide ဂျာနယ်ကို အပတ်စဉ် တနင်္လာ နေ့တိုင်းတင်ပေးသွားမှာဖြစ်ပါတယ်ဗျာ။ Mobile Guide ဂျာနယ် ကိုဖတ်ချင်သူများအတွက်မူရင်းဆိုဒ်က နေပြီး ဒေါင်းလုပ်လင့်ကိုတင်ပေးလိုက်တာပါဗျာ။ Mobile Guide ဂျာနယ်ဝယ်ဖတ်စရာမလိုတော့ဘူးပေါ့။ အခုအပတ်မှာ Mobile Guide Journal Vol(2), Issue (122)ကို တင်ပေးလိုက်ပါတယ်ဗျာ။ ဒီနေ့ 30 ရက်နေ့ထွက် Update လေးပါ။ ဂျာနယ်ကိုဝယ်ဖတ်ရန်အတွက် အဆင် မပြေသောနေရာဒေသမှ သူငယ်ချင်းများအားလုံးအဆင်ပြေကြပါစေဗျာ။
Digital Life Journal Issue Vol-2 ၊ Issue 21 (30.9.13)
Digital Life ဂျာနယ်ကို အပတ်စဉ် တင်္နလာနေ့တိုင်းတင်ပေးသွားမှာဖြစ်ပါတယ်ဗျာ။ Digital Life ဂျာနယ် ကိုဖတ်ချင်သူများအတွက်မူရင်းဆိုဒ်က နေပြီး ဒေါင်းလုပ်လင့်ကိုတင်ပေးလိုက်တာပါဗျာ။ Digital Life ဂျာနယ်ဝယ်ဖတ်စရာမလိုတော့ဘူးပေါ့။ အခုအပတ်မှာ Digital Life Journal Vol(2), Issue (21) ကို တင်ပေး လိုက်ပါတယ်ဗျာ။ ဒီနေ့ 30 ရက်နေ့ထွက် Update လေးပါ။ ဂျာနယ်ကိုဝယ်ဖတ်ရန်အတွက် အဆင် မပြေသောနေရာဒေသမှ သူငယ်ချင်းများအားလုံးအဆင်ပြေကြပါစေဗျာ။
အခု Post လေးကိုတော့ MMiTD မှာကတည်းကကျွန်တော့်ရဲ့ သင်ဆရာမြင်ဆရာတစ်ဦးဖြစ်တဲ့ ဆရာကြီး ကိုအောင်သန်းဦးတင်ပေးထားတဲ့ Post လေးကိုပြန်လည်မျှဝေပေးလိုက်ပါတယ်ဗျာ။
ကျနော်တို့မန်ဘာတွေစမ်းဖို့အကြံပေးချင်ပါတယ် CD LINUX MINIDWEP ဆိုတဲ့ OS ပါOS ဖြစ်လို့ WiFi Adapter တွေ Driver မသိတာကိုအင်စတောလုပ်ခွင့်ပြုတာကြောင့်ကွန်ပြုတာအားလုံးနီးပါးနဲ့အဆင်ပြေနိုင် ပါတယ်( CPU နိမ့်တဲ့စက်တွေမှာတော့မရပါ)။ အောက်ပါ Link မှာ အသုံးပြုပုံနဲ့ Software ကိုဒေါင်းယူနိုင် ပါတယ်ဗျာ။
Posted by Pyae Phyo (MMiTD)9comments :
အမျိုးအစား: Hacking , Network , Wifi
Real Basketball Apk v1.4.8 [Mod Unlocked]
Android ဖုန်းပေါ်မှာ Basketball ကစားချင်သူများအတွက် Real Basketball ကိုတင်ပေးလိုက်ပါတယ်ဗျာ။ ကျွန်တော်ကတော့ ၀ါသနာမပါလို့မဆော့ရသေးပါဘူး။ အခြားသောဝါသနာပါတဲ့သူငယ်ချင်းများအတွက် ရည်ရွယ်ပြီးတင်ပေးလိုက်တာပါဗျာ။ ရုပ်ထွက်လေးကြည့်ရတော့ အတော်လေးကောင်းမယ့်ပုံပါဘဲ။ နမူနာ ကြည့်နိုင်အောင်အောက်မှာ Screen Shoot ရိုက်ပြီးတင်ပေးထားပါတယ်ဗျာ။ Android OS2.3 နှင့်အထက်ဖုန်း များမှာကစားနိုင်မှာဖြစ်ပါတယ်ဗျာ။
Web Proxy မြင့်ကျော်ပြီး ဂျီမေးလ် အကောင့်အသစ်အခမဲ့ ဖွင့်နိုင်ပြီ
မေးလ် အကောင့် အသစ်ဖွင့်ရန် အခက်အခဲ တွေ့ကြုံ နေရာမှ ယခုအခါ ကိုင်တိုင်အခမဲ့ အကောင့်သစ် လျှောက်ထားနိုင်တော့မည်ဖြစ်သည်။
ုဆိုင်များကိုအခကြေးငွေ ပေး ဆောင်ရွက်စရာ မလိုတော့ဘဲ ယခုနည်းလမ်းကို အသုံးပြုပါက အကောင့်သစ်ကို လွယ်ကူစွာ ရရှိနိုင်ပါသည်။
အကောင့်သစ်ဖွင့်လိုသူများအနေဖြင့် မေးလ်အကောင့်ကို Web Proxy မှကျော်ပြီးဖွင့်လို့ရနိုင်ပါသည်။ အကောင့်များသည်ယခုအခါ သမရိုးကျဖွင့်ရန်ခက်ခဲ နေသည်မှာ ကာလအတန်ကြာနေခဲ့ပါပြီ။
ယခုကဲ့သို့ Proxy ကျော်ဖွင့် ရာ တွင်Login Name ကို Chat Availability မစစ်ရဘဲ လိုအပ်သည်များကို အားလုံး ဖြည့်စွက် ပြီးနောက်ဆုံး Account လုပ်ရန် နှိပ်လိုက်သည့်အခါ မှာ Login Name မရလျှင်ပြန်ဖြည့် ထည့်ပြီး ပြန်ဖွင့်ရမည်ဖြစ်သည်။
လုပ်ဆောင်ချက်မှာ - ပထမဦးစွာ http://hidemyass.com/ကိုအရင်သွားရမည်ဖြစ်သည်။ ပြီးလျှင် Box ထဲတွင် http://mail.google.com/ဟုရိုက်ထည့်ပြီး Hide My Ass Buttom ကိုနှိပ်ပါ ။ ထိုသို့ နှိပ်လျှင် Access Denied ဟိုပေါ်နေလျှင် Box အောက်နားလေးမှ SSL Security ကို On ထားရသည်။ ထိုကဲ့သို့ ပြုလုပ် ပြီး Gmail Window ကျလာလျှင် Creat an account ကိုကလစ်လိုက်ပြီး ပိုမှန်ဆောင်ရွက်နေကျအတိုင်း ဖြည့်စွက် ပြီး အကောင့်ဖွင့်ရမည်ဖြစ်သည်။
သို့သော် အကောင့်သစ် ဖွင့်ရာတွင် ကော်နက်ရှင် ကောင်းမွန်ရန်လိုအပ်ပြီး ကော်နက်ရှင်နှေးနေလျှင် သုံးလေးခါလောက် ကြိုးစားဖြည့်စွက် ပြီးဖွင့်ရန် F5 ခလုတ်ကို နှိပ်ပေးရမည်ဖြစ်သည်။
IT Weekly ဂျာနယ်-
ကိုသက်စိုး (မြောက်ဦး) မှ-
ref:AC Vs DC
Posted by Than Toe Aung No comments :
အမျိုးအစား: Hide IP
CameraPro 2.62 for Andriod free download
Andriod အတွက် ကင်မရာအလန်းစားလေး အသုံးပြုပြီး ဓါတ်ပုံ ရိုက်ချင်သူများအတွက် CameraPro 2.62
App လေးတင်ပေးလိုက်ပါတယ်။ဘာတွေလန်းလဲသိချင်ရင်ကိုယ်တိုင်ဒေါင်းပြီးသာ သုံးကြည့်ပါ။လိုချင်ရင်
DOWNLOAD HERE ( CamersPro 2.62 apk / 804 KB)
ဒေါင်း လိုဒ် အတွက် mirror link တွေ သုံးထားပါတယ် ခင်ဗျာ အရင် ကတော့ ဒေါင်းရ လွယ် အောင် single host နဲ့တင်ပေးနေတာ ခဏခဏ ပျက်နေတော့ အဆင်မပြေ ဘူး။ DOWNLOAD HERE
ကို နှိပ်လိုက်ရင် page တခု ပွင့်လာပါမယ် အဲဒီ page မှာ အပေါ်က logo တွေ တွေ့ ရင် ကြိုက်တဲ့
logo ဘေးနားက ကို နှိပ်လိုက်ပါ နောက်ထပ် page တခု ထပ်ပွင့် လာ ပြီး
Your preferred download link is ready! Click here to go to the page ဆိုတာကိုနှိပ်လိုက်ရင်
ဒေါင်းလို့ ယူရမယ် ဆိုဒ်ရဲ့ နေရာကို ရောက်ပါပြီ။
( ကြားထဲမှာ ကြော်ငြာလင့်တွေ
၀င်လာရင်တော့ပိတ်ပြစ်လို့ ရပါတယ် ကြော်ငြာတွေဝင်လာရင်လည်း ကျော်တတ်မယ်လို့ ထင်ပါတယ်)
Posted by Aung Hy (Anti Lobby) No comments :
GSM Bill Widget for Android
Android ဖုန်းတွေအတွက်ဆောင်ထားသင့်တဲ့ဆော့ဝဲလေးတစ်ခုပါ။ Home Screen ပေါ်မှာ Widget အနေနဲ့ သုံးပြီးတော့ GSM Bill စစ်ခြင်း၊ ဖြည့်ဖြင်း၊ Bill လွဲပေးခြင်းများ စသည်တို့ကို လွယ်ကူစွာ ပြုလုပ်နိုင်ပါတယ်။ ဒီဆော့ဝဲလေးကိုရေးသားသူကတော့ ကိုမိုးကုတ်သား (MPX Team) ဖြစ်ပါတယ်။ GSM Bill Widget for Android ကိုအောက်က link တွေ မှာရယူနိုင်ပါတယ်။
Adf.ly နဲ့ ငွေရှာနည်း
ကျွန်တော်လည်း စာမေးပွဲတွေနဲ့ဆိုတော့ ပို့စ် မတင်ဖြစ်တာ တော်တော်လေးကို ကြာသွားပြီ။ ဒီတစ်ခါကတော့ ဘလော့ဂါတွေအတွက် Adf.ly အသုံးပြုနည်းလေး ဖြစ်ပါတယ်။ တကယ်ဆိုရင် ဘလော့ဂါတွေ အတွက်မှ မဟုတ်ပါဘူး။ အင်တာနက်သုံးတဲ့သူတိုင်းအတွက်ပါ။
အမျိုးအစား: Money Making
Facebook vs Gmail အကောင့်ကို ဖုန်းနံပါတ်မတောင်းအောင်ဖွင့်နည်း
Facebook ပေါ်မှာ သူငယ်ချင်းတစ်ယောက် Share ပေးပြီး ဆိုဒ်မှာပြန်တင်ပေးပါဆိုလို့ အခြားသော လိုအပ် မယ့်သူငယ်ချင်းများကိုပါမျှဝေပေးလိုက်ပါတယ်ဗျာ။ ကျွန်တော့်ရဲ့ဘော်ဒါ Eagle ကျော်ကြီးက လည်းဒီစာအုပ် ကိုတောင်းထားတာကြာပြီဆိုတော့အဆင်ပြေသွားတာပေါ့ဗျာ။ ဒီစာအုပ်ကိုမူရင်းရေးသားထားသူကတော့ Mr.phyo Technology Sharing ဖြစ်ပါတယ်ဗျာ။
အမျိုးအစား: Ebook , Facebook , Gmail
Hacker ဆိုသည်မှာ Computer System များ၊ Electronic နည်းပညာရပ်များကို ကျွမ်းကျင် တတ်မြောက်ပြီး၊ ထိုနည်းပညာရပ်များကို အသုံးချကာ Computer Security နှင့်သက်ဆိုင်သော Program များ၊ Application များကို ရေးသားသူသာ ဖြစ်သည်ဟူ၍ Hacker Community မှ ယူဆထားပြီး၊ နည်းပညာရပ်များကို မသမာသော ရည်ရွယ်ချက်များဖြင့် အသုံးချလေ့ရှိသူများကိုမူ Cracker ဟူ၍သာ သတ်မှတ်လေ့ရှိသည်။
အကြမ်းအားဖြင့်မူ White Hat Black Hat နှင့် Grey Hat ဟု ခွဲခြားနိုင်သည်။ ထို White Hat Black Hat စသော အသုံးအနှုံးများမှာလည်း ရုပ်ရှင်ဇာတ်ကားများတွင် ဦးထုပ်အနက်ဆောင်းသောသူသည် ဇာတ်လိုက် (လူကောင်း)၊ ဦးထုပ်အနက်ဆောင်းသောသူသည် လူကြမ်း (လူမိုက်) စသည်ကို အကြောင်းပြု၍ကင်ပွန်းတပ်ကြခြင်းသာ ဖြစ်သည်။
White Hat များသည် ၄င်းတို့၏ နည်းပညာဆိုင်ရာ ကျွမ်းကျင်မှုများကို မသမာသည့်လုပ်ရပ်များတွင် အသုံးချခြင်း မရှိဘဲ Black Hat များ၏ နှောက်ယှက်ခြင်း ခံရသောသူများအား ကာကွယ် စောင့်ရှောက်လေ့ရှိသူများဟုဆိုနိုင်သည်။
Black Hat များမှာမူ ၄င်းတို့၏ ကျွမ်းကျင်မှုများကို မသမာသော လုပ်ရပ်များဖြစ်သည့် Credit Card Information များ ၊ Bank Information များခိုးယူခြင်း၊ သူတပါး၏ Website များကို ၀င်ရောက် စီးနင်းသိမ်းပိုက်ခြင်း၊ အခကြေးငွေ ရယူပြီး သူတပါး၏ ကိုယ်ရေးကိုယ်တာမှတ်တမ်းများ၊ သတင်းအချက်အလက်များကို ခိုးယူပေးခြင်း စသည့်လုပ်ရပ် များကို လုပ်ဆောင်လေ့ရှိသူများ ဟု အကြမ်းအားဖြင့် သတ်မှတ်နိုင်သည်။
Grey Hat များမှာမူ White Hat အဖြစ် သော်လည်းကောင်း၊ Black Hat အဖြစ်သော်လည်းကောင်း ရပ်တည်ခြင်းမရှိဘဲ ၄င်းတို့ တတ်ကျွမ်းထားသည့် နည်းပညာကို အလျဉ်းသင့်သလို အသုံးချသူများ ဟူ၍ ဆိုနိုင်သည်။
၁။ (ခ) Hacker အဆင့်အတန်းများ
Hacker ဖြစ်လိုသော လူငယ်များဖြစ်ပြီး၊ Hacking နှင့် စပ်လျဉ်းသည့် နည်းပညာများကို လေ့လာ သင်ယူခြင်းမရှိဘဲ၊ အခြား Hacker များ ဖန်တီးထားသည့် Tool များကို ရယူအသုံးချလေ့ရှိသူများ ဖြစ်သည်။ Hacking Tool များကို ကျွမ်းကျင်စွာ အသုံးချတတ်သော်လည်း ထို Tool များ မည်သို့ လုပ်ဆောင်သည်ကို မသိရှိ၊ မလေ့လာဘဲ အသုံးချသူများသာဖြစ်သည်။
Computers Networks Programming နှင့်သက်ဆိုင်သော နည်းပညာရပ်များကို တတ်မြောက် သော်လည်း ၄င်းနည်းပညာရပ်များကို လက်တွေ့ အသုံးချခြင်းမရှိဘဲ အခြားသူများရေးသားထားသည့် Exploits ( Software များ၏ လုံခြုံရေးဆိုင်ရာအားနည်းချက်များကို အသုံးချထိုးနှက်ပြီး Computer System ကို ထိန်းချုပ်ရန် ရည်ရွယ်ချက်ဖြင့် ရေးသားထားသော Code ) များကို အသုံးချပြီး တိုက်ခိုက်မှုများကို လုပ်ဆောင်သူများဖြစ်သည်။
နည်းပညာကြွယ်ဝသော Hacker များဖြစ်ပြီး၊ Hacking Tool များ Exploit များကို ကိုယ်တိုင် ရေးသားပြီး အသုံးပြုသူများဖြစ်သည်။ Computer System များအတွင်းသို့ မည်သည့် သဲလွန်စမျှ မကျန်စေဘဲ ၀င်ရောက်နိုင်စွမ်းရှိသူများဖြစ်သည်။
၁။ (ဂ) Hacker တစ်ဦးဖြစ်လာရန်
လေ့လာသင်ယူလိုမှုနှင့် တီထွင်ဖန်တီးနိုင်မှုသည် Hacker တစ်ဦးဖြစ်လာရန် အတွက် အခြေခံ အကျဆုံးနှင့် အဓိက အကျဆုံးသော လိုအပ်ချက်များပင်ဖြစ်သည်။
၂။ Password အကြောင်းသိကောင်းစရာ
Computer System များနှင့် Web Based System များ၊ Website များသည် လုံခြုံရေးနှင့် ပုဂ္ဂလိကမှတ်တမ်း များကို ကာကွယ်ရန်အတွက် Password ကို အသုံးပြုလေ့ရှိသည်။ သို့သော်လည်း Hacker များသည် ယင်း Password ဖြင့် ကာကွယ်မှုများကို ကျော်လွှားပြီး မသမာသော လုပ်ရပ်များလုပ်ဆောင်ခြင်း၊ ကျူးကျော်ခြင်းစသည့် လုပ်ရပ်များကို လုပ်ဆောင့်လေ့ရှိကြသည်။ အချို့သော Hacker များသည် Bank Information ဆိုင်ရာ အချက် အလက် များကို ခိုးယူခြင်း၊ ကိုယ်ရေးကိုယ်တာအချက်အလက်များကို ခိုးယူပြီး ခြိမ်းခြောက်ခြင်းစသည့်လုပ်ရပ်များကို လုပ်ဆောင်ရန်အတွက် E Mail Password၊ Computer Password စသည်တို့ကို ပစ်မှတ်ထားကာခိုးယူလေ့ရှိသည်။
ဖော်ပြမည့် Password ဆိုင်ရာ အချက်အလက်များအား Password နှင့်ဆိုင်သော ခြိမ်းခြောက်မှုရန်မှ ကာကွယ်နိုင်စေရန်အတွက်သာ ဖော်ပြထားခြင်း ဖြစ်ပြီး၊ အခြားသောသူများ၏ ကိုယ်ရေးကိုယ်တာ လွတ်လပ်မှုကို ကျူးကျော်ခြိမ်းခြောက်ရန်အတွက် အသုံးမပြူစေလိုပါ။
Password ဖြင့် ကာကွယ်မှုများကို ကျော်လွှားခြင်း
အခြားသောသူများ၏ Password ကိုရယူရန်အတွက် နည်းလမ်းများစွာရှိသည့်အနက်မှ Social Engineering သည် အဟောင်းနွမ်းဆုံး၊ အရိုးစင်းဆုံးဖြစ်သော်လည်း အသုံးဝင်ဆုံးဖြစ်သည်။ Social Engineering Attack သည် ယုံကြည်မှု၊ သတိကင်းမဲ့မှု၊ လျစ်လျူရှုမှုများစသည့် အားနည်းချက်များကို အသုံးချကာတိုက်ခိုက်ထိုးနှက်ခြင်း ပင် ဖြစ်သည်။
မကြာသေးမီကပင် Twitter Website သည် Social Engineering ကို အသုံးပြု၍ တိုက်ခိုက်ကျူးကျော်ခြင်းကိုခံခဲ့ရသည်။ ထို့ပြင် ထိပ်တန်း Hacker ကြီးဖြစ်သော Kevin Micknick ပင်လျှင် Social Engineering Attack ဖြင့် ထိုးနှက်ခြင်းကို ခံခဲ့ရသည်။
အောက်တွင်ဖော်ပြထားသော Social Engineering Attack ဆိုင်ရာ ဥပမာများမှာ Hacker များ အသုံးပြုလေ့ရှိသည့် အနက်မှ အချို့သာဖြစ်ပြီး၊ ၄င်းတို့သည် ရိုးစင်းလွန်းလှသည်ဟု ယူဆရသော်လည်း ထောင်ပေါင်းများစွာသော သူတို့သည် ဤနည်းများကို အသုံးပြု၍ တိုက်ခိုက်ခြင်းကို ကြုံတွေ့ခဲ့ရပြီး၊ ကြုံတွေ့ရဆဲနှင့်ဆက်လက်ကြုံတွေ့ရ ဦးမည်သာ ဖြစ်သည်။
Shoulder Surfing Attack ဆိုသည့်အတိုင်းပင် အသုံးပြုသူ ဖြည့်သွင်းလိုက်သော Password ကို ချောင်းမြောင်းကြည့်ရှုပြီး ရယူခြင်းပင်ဖြစ်သည်။ ဤတိုက်ခိုက်မှုကို ကာကွယ်ရန်အတွက် အကောင်းဆုံးနည်းမှာ Password ဖြည့်သွင်းစဉ်တွင် ပတ်ဝန်းကျင်ကိုသတိထားပြီးမှာသာ ဖြည့်သွင်းရန်ဖြစ်ပြီး၊ ထိုသို့ တိုက်ခိုက်ခြင်းခံခဲ့ရပါက အကောင်းဆုံးသော တုံ့ပြန်မှုမှာ ချောင်းမြောင်းကြည့်ရှုသူ၏ မေးရိုးအား ၀ိုက်လက်သီးဖြင့် ပြင်းထန်စွာထိုးနှက်ခြင်းပင်ဖြစ်သည်။
များသောအားဖြင့် အသုံးပြုသူများသည် Password ရွေးချယ်ရာတွင် မိမိတို့၏ မွေးသက္ကရာဇ်၊ မှတ်ပုံတင်အမှတ်၊ ရင်သွေးငယ်များ၏အမည်၊ တယ်လီဖုန်းနံပါတ် စသည်တို့ကိုသာ ရွေးချယ်လေ့ရှိသည်။ ဤသည်ကပင် တိုက်ခိုက်ရန်အတွက် အလွယ်ကူဆုံးသော၊ အားနည်းမှုအရှိဆုံး အခြေအနေသို့ ရောက်ရှိအောင် ကိုယ်တိုင်ရွေးချယ်ဖန်တီးခြင်းပင်ဖြစ်သည်။
Dictionary Attack ဆိုသည်မှာ ရွေးချယ်လေ့ရွေးချယ်ထရှိသော Password များပါဝင်သည့် Text File ပါဝင်သည့် Programme တစ်ခုကို အသုံးပြုပြီး၊ Password ကို သိမ်းဆည်းထားသော Database နှင့် ထို Password File တွင်ပါဝင်သော Password များကို တိုက်ဆိုင်စစ်ဆေးကာ Password ကိုရယူခြင်းဖြစ်သည်။ လုံခြုံရေးဆိုင်ရာ ကောင်းမွန်သော Password များကို တိုက်ခိုက်ရန်မှာ မလွယ်ကူလှပေ။
Dictionary Attack အတွက် အသုံးပြုသော Programme ပေါင်းများစွာရှိပြီး၊ အချို့ကိုအခမဲ့ရယူ သုံးစွဲနိုင်သည်။
Brute Force Attack သည် ဖြစ်နိုင်ချေရှိသော Password ကို Letters များ (abcdefghijklmno……)၊ Number များ (0123…….)၊ Special Characters (@#%*^!”>,, …..) စသည်တို့ကို တွဲဖက်ပြီး ၄င်း Results များကို Password Database နှင့်တိုက်ဆိုင်စစ်ဆေးကာ Password ကို ရယူခြင်းပင်ဖြစ်သည်။
Credit to - Myanmar Network
အမျိုးအစား: Hacking , IT ဗဟုသုတ
Facebook လော့ကျတာနှင့်hack ခံရသောအကောင့် အားပြန်ယူနည်း
facebook လော့ ကျသွားလို့ စိတ်ညစ်နေလား .......? စိတ်မညစ်ပါနဲ့တကယ်တော့ လတ်တလောပြောင်းလဲသွားတဲ့ policy တွေကြောင့် facebook ကလုံခြုံရေးတွေကိုတိုးမြှင့် ပြီးတင်းတင်းကျပ်ကျပ်ကိုင်တွယ်လိုက်တော့ အားလုံးအနည်းနဲ့ အများဒုက္ခရောက်ရ
တာပါ။ဒီနေရာမှာ လော့ ကျ တဲ့ အကောင့် ဖြစ်ဖြစ် hack ခံရတဲ့ အကောင့် ဖြစ်ဖြစ်ပြန်လည်ရယူနိုင်မဲ့ နည်းလမ်းကောင်းလေးကိုပြန်လည်မျှဝေပေးလိုက်ပါတယ်နော်။
မိမိတို့ အကောင့် ကိုပြန်ယူမယ်ဆိုရင်ဒီနည်းလမ်းလေးကိုသုံးပါခင်ဗျာ။password ပြောင်းပေးရမှာဖြစ်ပါတယ်။
ပြီးတော့ security မေးခွန်းကိုသေသေချာချာမှတ်ထားပေးရင်အဆင်ပြေပါပြီ။ဒီနေ့ နံက်မှာကျွန်တော်အကောင့်နှစ်ခုကို
စမ်းသပ်ခဲ့ ပါတယ် အကောင့် တစ်ခုကတော့ ရပါတယ် ။နောက်အကောင့် တစ်ခု က facebook က နောက်တစ်နည်းနဲ့ လုပ်ရမှာဖြစ်လို့ အဲဒီနည်းလမ်းကိုနောက်မှဆက်ပြီးရေးပေးပါမယ်ခင်ဗျာ။100% နှုန်း working ပါ။အားလုံးပဲဆင်ပြေပါစေဗျာ။
(အဆင့် -၁) http://www.facebook.com/hacked ကိုသွားပါ
(အဆင့် -၂) အဲဒီ page ကိုရောက်တာနဲ့ အနီနဲ့ ဝိုင်းထားတဲ့ နေရာကိုနိပ်ပါ။
(အဆင့် -၃ ) facebook အကောင့် ဆောက်ထားတဲ့ email ဖြစ်ဖြစ် phone နံပါတ်ဖြစ်ဖြစ်ပေးပါ။ပြီးရင် SEARCH ကိုနိပ်ပါ။
(အဆင့် -၄) အီးမေးနှင့် PASSWORD အဟောင်းကိုပေးပြီး CONTINUE ကိုနိပ်ပါ။
(အဆင့် -၅) password အသစ်ကိုနှစ်ခါရိုက်ပေးပါ။ပြီးရင် continue
(အဆင့် -၆ ) continue ကိုနိပ်ပါ။
(အဆင့် -၇) ဒီနေရာမှာsecurity မေးခွန်းမေးပြီးတော့ အဖြေပေးပါသေသေချာချာမှတ်ထားပါ။
(အဆင့် -၈) ဒီနေရာမှာ login ကိုနိပ်ပါ
(အဆင့် -၉ ) continue ကိုနိပ်ပါ
(အဆင့် -၁၀ ) ပေးထားတဲ့ စါသားတွေ့ဖြည့် ပါ
(အဆင့် -၁၁ ) ဖုန်းနံပါတ်ထည့် ပါ။
ဒီအဆင့် မှာတော့ မိမိတို့ ဖုန်းထဲကိုရောက်လာတဲ့ message ကိုကြည့် ပြီးရလာတဲ့ ကုဒ်နံပါတ်များကို confirm အကွက်ထဲမှာထည့် ပေးလိုက်ပါ။သင့် အကောင့် အားပြန်လည်ရယူနိုင်ပါပြီခင်ဗျာ။
Credit to - ဘလော့ခရီးသည်
အထက်ပါနည်းလမ်းလေးကို PDF File အဖြစ်သိမ်းထားချင်တယ်ဆိုရင်တော့ အောက်မှာဒေါင်းယူသွားနိုင်ပါ တယ်ဗျာ
အမျိုးအစား: Facebook , Hacking
IcoFX 2.5 Portable Full Version
Pro Evolution Soccer 2014 (PES 2014) For Xp/Vista/7/8 (2.6Gb)
တောင်းဆိုထားတဲ့ အစ်ကိုအတွက် Pro Evolution Soccer 2014 (PES 2014) (2.6Gb) တင်ပေးလိုက်ပါပြီဗျာ။ စိတ်ရှည်ရှည်သာ ဒေါင်းပါ။ Resume download ရပါတယ်။ Install လုပ်နည်းပါရေးပေးထားပါတယ်။ လွယ်လွန်း လို့ မြန်မာလိုပြောမပြတော့ဘူးနော်.......အားလုံးပဲအဆင်ပြေပါစေဗျာ။
Posted by အိုင်တီသားလေး 1 comment :
Android ဖုန်းအသုံးပြုသူများအတွက် Zapya apk v1.8.1 (Latest Version) တင်ပေးလိုက်ပါတယ်။ အားလုံး သိတဲ့ အတိုင်း ပဲ data transfer လုပ်ရာမှာ bluetooth ထက် ၁၀ဆ မြန်တဲ့ကောင်လေးပါ။ နံမည်ကြီးေ ဆာ့ဝဲ လ်ဖြစ်ပါ တယ်။ အလုပ်မအားလို့ အခုမှပဲတင်ဖြစ်တော့တယ်။ လိုမယ်ဆို အောက်မှယူသွားပါဗျာ.....
▼ September ( 201 )
Windows SeVen Super XP 2013 (32bit edition) (644MB...
Digital Life Journal Issue Vol-2 ၊ Issue 21 (30.9....
Web Proxy မြင့်ကျော်ပြီး ဂျီမေးလ် အကောင့်အသစ်အခမဲ့...
Pro Evolution Soccer 2014 (PES 2014) For Xp/Vista...
မိမိလိုအပ်တဲ့ File တွေကို အလွယ်တကူ ရှာပေးမဲ့ Searc...
One Click Root Download Root Tool
Watch 1300+ Live worldwide TV channels, on your PC...
Atomic Alarm Clock 6.18 crack + serial
Wise Floder Hider 1.40 final free download
မြန်မာတွေဖန်တီးထားတဲ့ JAS Gallery v1.0apk
iOS 7.0.2 To Fix Lockscreen Bypass Frimware
Action Center အပီးဖျောက်နည်း
Password Fighter PRO 1.1.16 Full + Crack
ဖုန်းပေါ်မှာအလန်းဇယားလေးပြုလုပ်ချင်သူများအတွက် TSF ...
Tango v3.1.60751 apk (Latest Version)
Netguide Journal Vol (3), Issue (3) (25.9.13)
Real Hide IP 4.3.3.8 Full Version + Patch (Latest ...
SnowFox Greeting Card Maker 2.0.1.0 Portable versi...
အင်တာနက် ဂျာနယ် အတွဲ (14) အမှတ် (37) (24.9.13)
Digital Life Journal Issue Vol-2 ၊ Issue 20 (23.9....
Search Engine တစ်ခု ဘယ်လိုအလုပ်လုပ်လဲ
Next Launcher 3D (2.02) Full APK
Firefox Browser က Plug In ကိုဘယ်လိုဖြုတ်မလဲ မြန်မာ...
Screen Off and Lock Donate v1.17.2 Apk (Latest Ver...
Nero 2014 Platinum final full version free downlo...
Auslogics Disk Defrag Pro 4.3.0.0 | 6.31 MB
Uniblue SpeedUpMyPC 2013 v5.3.10.0 Multilanguage
Windows7Manager v4.3.2 Final
ဘောလုံးဝါသနာအိုးများအတွက် FIFA 14 by EA SPORTS™ v1...
Download TinyUmbrella v7.00.00
New To ADB And Fastboot Guide
Leawo Blu-ray Player 1.3.0.46 protable for pc free...
iPhone ကနေ Wifi ပြန်လွှင့်နည်းစာအုပ် ( မြန်မာလို ) ...
Angry Birds Star Wars-2 v1.0.2 apk For Android Gam...
GOthere Myanmar 2014 Beta Release
Sony ဖုန်းများအတွက် [Hard reset] လုပ်နည်း
Sprinkle မီးသတ်ဂိမ်း for andriod free download
ကွန်ပျူတာဖြင့်ရုပ်သံ တည်းဖြတ်နည်းလက်စွဲ (မြန်မာလိ...
Wise Care 365 pro 2.81 Build 221 full version + pr...
Direct links to download iOS 7
Internet download manager 6.17 build 11 (18/09/20...
Android ဖုန်းတစ်လုံးမှာဆောင်ထားသင့်တဲ့ Advanced Ta...
Link ကိုကြည့်ရုံနဲ့ ပိုက်စိရတယ်
ကွန်ပြူတာ အမေးအဖြေ (မြန်မာ-Ebook)
Netguide Journal Vol (3), Issue (2) (18.9.13)
Snap Camera HDR v3.5.3 Apk For Android
Internet Download Manager 6.17 Build 10.1 Full
ADOBE Photoshop CS5- Portable (64mb)
PC Cleaner Pro 2013 v11.8.13.9.6 + Serial Key
Avast Premier Antivirus 8.0.1483 Cracked
Malwarebytes Anti-Malware v1.75.0.1300 + Serial-FF...
Adobe In Design CS3 ဧ။် အသုံးပြုနည်းပေါင်း ၁၀၀ စာအ...
Avast Internet Security 8.0.1488.286-P2P(license u...
SpyHunter NEWEST VERSION FuLL